Wadahadalkii Somalia Iyo Maamulka Somaliland Oo Markale Dib U Dhacay (Sababta) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wadahadalkii Somalia Iyo Maamulka Somaliland Oo Markale Dib U Dhacay (Sababta)
Hargeysa, Mareeg.com: Wada hadal lagu weday in todobaadkaan uu dalka Turkiga ku dhex maro dowladda Federaalka ah ee Soomaaaliya iyo maamulka Somalinlind ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii ay arrintaas codsatay dowladda Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha dibada maamulka Somaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in shirku uu dib u dhacay kadib markii dowladda Soomaaliya codsatay in dib loogu dhigo ilaa laga soo dhisayo Golaha Wasiirada cusub ee xukuumadda Raysul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
Waxaa baaqaday wafdigii maamulka Somaliland uga qeybgeli lahaa shirkaas, kuwaasoo qorshuhu ahaa iney shalay oo axad ah ka baxaan Hargeysa.
“Waxaa nala soo xiriiray Madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirada, waxay yiraahdeen inta aan Wasiirada ka soo dhisayno dib ha naloogu dhigo shirka, maadaama cida ka qeyb galeysa aanay sharciyad heysan” ayuu yiri wasiirka arrimaha debadda Somalilnad Maxamed Biixi Yoois.
Wuxuu sheegay Maxamed Biixi in dowladda Soomaaliya ay ka dalbatay in 15-ka bishan loogu dhigo shirka, hase ahaatee ay iyagu diideen, maadaama maamulka Somaliland xilligaas shir kale dibada ku leeyihiin.
Maxamed Biixi Yoois ayaa xusay in lagu balamay dhamaadka in wada hadalka labada dhinac uu dhaco dhamaanka bishan Janaayo ee sanadka 2014.
Somalia:Internal displaced families in Lower Shabelle face lack of shelter